NCS Ajụjụ maka ndị na-eto eto na ndị nne na nna / ndị nlekọta - Element Society
Ebee ka m nwere ike ịhụ ndepụta ngwugwu?
Ebee ka usoro m ga - eme?
Enwere m ike ịbanye na NCS na ndị enyi m?
Enwere ekwe ntị na ekwentị NCS?
Ndi na-eto eto kwesiri iwebata akpa akpa?
Kedu nri ndị e nyere?
A na-etinye ndepụta ndepụta ahụ na NCS Oge Nchịkọta Summer / Mgbụsị akwụkwọ anyị na-ezitere ndị na-eto eto na ndị nne na nna / ndị nlekọta ha nwere ebe ndị e wusiri ike *. Anyị na-ezipụ ha ihe dịka otu ọnwa tupu mmalite nke usoro ihe omume ahụ.
Ọ bụrụ na ịnataghị Nchịkọta Nchịkọta / Nchịkọta NCS gị NCS, ị nwere ike pịa njikọ dị n'okpuru iji hụ nsụgharị intaneti nke na-agụnye ndepụta ndenye.
NCS Summer Summer 2017 Guide
A na-enye gị ohere weta akpa akwa na otu akpa akpa gị. A ga-ahapụ ihe ọ bụla ọzọ akpa, biko biko nọrọ n'ime akpa. Biko gbalịa izere iji akpa akwa maka ohere ohere dị oke.
Ndị na-eto eto ekwesịghị iwebata ihe ọ bụla a machibidoro iwu dịka mmanya, ọgwụ ọ bụla na-akwadoghị, ihe iwu na-akwadoghị, penknives ma ọ bụ ngwá agha na NCS. Anyị na-agwa ndị na-eto eto ka ha na-asọpụrụ iwu ndị a dị ka ihe ga-esi na ya pụta ma ọ bụrụ na achọtara na ha nwere ihe ọ bụla n'ime ihe ndị a.
Biko rịba ama na anyị enweghị ike ị hụ ihe onwunwe nke aka gị. N'ihi nke a, anyị na-akwado ka ị ghara iweta ihe dị oké ọnụ ma ọ bụ ihe dị oké ọnụ ahịa.
Usoro NCS ọ bụla na-ewere ọnọdụ n'ime UK.
N'afọ gara aga, ndị na-eto eto agawo ebe ndị dị ka Scotland, Cumbria, Kent na Wales maka usoro 1 nke usoro ihe omume ahụ.
Ọganihu 2 na 3 na-adịkarị nso n'ebe onye na-eto eto nọ, mgbe mgbe n'ime njem dị anya site na ụlọ ha ma ọ bụ ụlọ akwụkwọ, ma nke a dị iche na ndị na-eto eto nwere ike ịga n'ihu n'ụlọ.
Anyị ga-ezite usoro oge na ozi ndị ọzọ gbasara kpọmkwem ebe dịka otu ọnwa tupu ụbọchị mbido nke usoro ọ bụla mgbe emere nkwenye niile.
Ndị ga-eso ga-aga ebe a na-enwe nzukọ nke na-abụkarị n'ime ma ọ bụ dị nso n'ógbè ha. Anyị ga-emezi ndokwa ịga kpọta ndị na-eto eto gaa n'ebe ọ bụla ọzọ. Ndị na-eto eto na ndị nne na nna ha ma ọ bụ ndị nlekọta na-ahụ maka ịhazi njem ha na ebe nzukọ na site na nlọghachi azụ n'oge oge egosipụtara na oge ha.
Ndị na-eto eto nwere ike ịbanye na ndị enyi, ma ọ bụrụ na ha tinye maka otu ụbọchị ahụ n'otu mpaghara ahụ ma họrọ otu Usoro nke 2, ha nwere ezigbo ohere ịnọ n'otu usoro. Ozugbo ha abanyela aka, ndị na-eto eto nwere ike ịkpọtụrụ anyị na-arịọ ka anyị nọ n'otu usoro ma ọ bụ ịkekọrịta ọnụ ụlọ. Ọ ga-adị mkpa ka anyị mata aha enyi ọ bụla anyị ga-eme ike anyị niile iji chee echiche. Ọ bụ ezie na anyị agaghị ekwe nkwa nke a, ịbanye na mbụ ga-eme ka ohere ha dịkwuo ukwuu!
NCS bụ ụzọ dị mma isi zute ndị ọhụrụ ma mee ndị enyi ọhụrụ! Lelee vidiyo anyị ebe a.
Ọtụtụ ndị na-eto eto na-achọpụta na ọ bụ ezie na ha etinyela ha n'òtù dị iche ma ọ bụ na ndị enyi ha na-efegharị, usoro ihe omume ahụ na-ewepụta onwe ya iji zukọta ndị mmadụ site na ime ụlọ ọrụ na na onye isi ha bụ onye ukwu na-adabere na ya ma ọ bụrụ na ha amaghị. Anyị na-ahapụ ụfọdụ ndị na-eto eto site na ụlọ akwụkwọ ọ bụla na usoro ọ bụla, ya mere usoro ihe omume a ga-abụ oge mbụ ọtụtụ ndị na-eto eto na-ezute ibe ha. N'ime usoro ihe omume ahụ, na karịsịa na mbido, a ga-enwe ọtụtụ egwuregwu egwuregwu na ice mmiri iji hụ na onye ọ bụla ga-ama ndị ọzọ na-eto eto nọ n'òtù ha.
Tụkwasị na nke ahụ, ọtụtụ ndị na-eto eto na-ekwu na otu n'ime akụkụ kachasị mma nke usoro NCS na-ezute ọtụtụ ndị ọhụrụ ma na-eme ndị enyi ọhụrụ. Pịa ebe a iji hụ ụfọdụ n'ime ahụmahụ ndị anyị na-aga n'ihu. Anyị enweghị ike ịnye ozi gbasara otu ìgwè ndị na-eto eto ga-abanye, ebe ọ bụ na a na-ekenye ndị otu maka mmemme ọ bụla ụbọchị ole na ole tutu usoro ahụ amalite ụbọchị. Ndị na-eto eto ga-achọpụta otu ìgwè ha nọ na ụbọchị mbụ nke usoro ihe omume ahụ.
Biko rịba ama na ebe obibi na NCS bụ otu nwoke ma ọ bụ nwanyị, ya mere, anyị enweghị ike ịkwado ọnụ ahịa ụlọ maka ndị na-eto eto dị iche iche.
Enwere ekwe ntị igwe ekwentị n'ememme NCS?
A na-ekwe ka ndị na-eto eto wetara ha ekwentị (na chaja) ha na usoro NCS ma nwee ike iji ha mee ihe mgbe anaghị eme ihe (iji ekwe ntị eme ihe n'oge arụ ọrụ anaghị ekwe). Biko rịba ama na enwere ike ịbịghị ekwentị mkpanaka mgbe niile, karịsịa n'oge mmepe 1 nke a na-ejikarị eme obodo.
Ebe obibi anyị niile na-abịa na ụlọ ọrụ ndị dị mkpa, dịka ịnweta oghere ike, mmiri ozuzo, wdg. N'agbanyeghi ụdị ụlọ na usoro ha, ndị ga-enwe ike ịnweta ogwe aka na ya ga-enwe ike ịdọrọ igwe ha. Ịnweta nwere ike ịdị oke oke maka ebe obibi ụlọikwuu.
Biko rịba ama na anyị enweghị ike ịmebe ihe nke aka gị ka ndị na-eto eto na-ebute ha n'ekwentị na ha nwere ihe ize ndụ.
Ee e, ọ dịghị mkpa ka ndị na-eto eto weta akpa ụra. Ebe obibi anyị niile na-abịa na ihe ndina, gụnyere ụlọ obibi na ebe obibi. Anyị na-enyekwa ihe ndina maka ogige abalị ahụ nke ndị na-eto eto na-ekere òkè n'oge Part 1.
A ga-enye ihe oriri na ihe ọṅụṅụ n'oge oge obibi nke usoro ihe omume ahụ (mgbe ndị na-eto eto nọ n'ụlọ). Naanị ị ga - eweta nri ehihie maka ụbọchị mbụ nke usoro 1 (na Phase 2 dabere na mmemme ahụ, biko lelee usoro oge gị).
Ogologo oge a gwara anyị banyere mkpa onye ahụ na-eto eto tupu oge eruo, anyị nwere ike inye nri pụrụ iche maka ihe oriri, gụnyere haral, kosher, anụ anaghị eri anụ, vegan, na nri na-enweghị gluten, na ihe oriri dị iche iche nri. Lee ihe atụ nke nri dị n'oge ebe obibi. Nhọrọ ga - adị iche:
Maka mmemme mmemme
Oge 1 (obibi):
Biko weta nri ehihie maka ụbọchị mbụ. A na-enyezi ihe oriri dị elu site na ebe ọrụ imepụta ihe.
Nri ụtụtụ: ọka ọṅụṅụ, esi nri nri ụtụtụ, porridge
Nri ehihie: sandwiches, crisps, mkpụrụ
Nri abalị: nri dị ọkụ (eg pasta, pizza, curry, chilli), salad, dessert
Oge 2 (obibi)
Lelee oge ị ga-ahụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịme nri ehihie maka ụbọchị mbụ. Ihe mgbochi ahụ na-enye nri na ndị na-eto eto ga-esi nri n'onwe ha ka ha bụrụ akụkụ nke ahụmahụ ndụ ha.
Nri ụtụtụ: ọka ọṅụṅụ, toast
Nri abalị: nhọrọ nke oriri na-ekpo ọkụ a họọrọ ma sie ya dị ka otu (dịka sausages na poteto ndị na-esi ísì ụtọ, nsị-fry, pizza)
Oge 3 (na-abụghị onye obibi)
Biko weta nri ehihie gị. Enweghị nri.
Maka mmemme mgbụsị akwụkwọ
Oge 1 (obibi)
Ụzọ 2 na 3 (ụbọchị ọrụ, ịnọ n'ụlọ n'abalị)
NDỊ MỤRỤ NA GARDIANS
Ebee ka ndị na-eto eto ga-ehi ụra n'oge ha bi?
Kedu ihe na-eme na Ozi Ochie?
Ego ole ka ọ na-eri iji soro NCS?
Ụfọdụ ndị na-eto eto na-aga n'usoro ihe omume ahụ nwere omume ịma aka?
Ònye ga-ahụ maka ndị na-eto eto nọ n'ala?
Ndi ozo na NCS ga etinye aka na omumu omumu m?
Kedu ka m ga esi esi tinye nwa m?
Ebee ka ndị na-eto eto ga-arahụ ụra n'oge ha bi?
Enwere ohere dịgasị iche iche dị na NCS (dịka ọmụmaatụ ọnụ ụlọ dị iche iche, ụlọ ntu, yurts, na ihe ndị ọzọ), ebe obibi ahụ ga-adịgasị iche site n'usoro ihe omume. A ga-ezite nkọwa maka ebe obibi na ebe maka usoro ihe omume ọ bụla na ndị nsonyere otu ọnwa tupu usoro amalite ụbọchị.
Ụlọ ebe a na-ahụ maka ụlọ ọrụ, ụlọ akwụkwọ mahadum ma ọ bụ ndị ọzọ na-elekọta ụlọ na-edebe ebe obibi ahụ na e nwere ihe nchedo dị n'ebe ahụ iji mee ka ndị bi na ya dị nchebe dị ka o kwere mee. A na-ekewa ndị nwoke na ndị inyom n'ime ụlọ nwoke na-alụbeghị di ma ọ bụ nwunye, a gaghị ekwe ka ha banye n'ọnụ ụlọ ndị ọzọ.
Ulo na-eji ihe ndi di mkpa di ka ohere nke mmiri ozuzo na oghere ike. Enwere ike ịkekọrịta ụfọdụ ụlọ, gụnyere ime ụlọ ịwụ, na ndị ọzọ na-eto eto ma ọ ga-abụ naanị ndị na-agụ otu nwoke.
Ọ bụ ezie na ọ dịghị oge a chọrọ ka ndị na-eto eto na-ehi ụra, ndị na-eto eto niile aghaghị ịnọ n'ụlọ ha site na 10.45pm. Anyị na-atụ aro ka ndị na-eto eto nweta ezigbo ụra abalị iji hụ na ha na-enwe obi ụtọ n'oge ọrụ ndị na-esote!
Maka mmemme amalite n'oge ezumike okpomọkụ:
N'oge nke 1, ndị na-eto eto na-anọ na-arụ ọrụ n'èzí n'ime ime obodo. Ụdị ụlọ nwere ike ịdị iche. O nwere ike ịbụ ebe obibi ezumike, na njem njem ụlọikwuu abalị, ma ọ pụkwara ịbụ ụlọ ntu ma ọ bụ yurts. A ga-eziga nkọwa maka usoro nke ọ bụla na ndị natara ihe dika otu ọnwa tupu ụbọchị mmalite.
N'oge nke 2, ndị na-eto eto ga-enweta ndụ onwe ha site n'ịhapụ ụlọ ma na-esi nri ha. Ọzọkwa, ndokwa ụlọ nwere ike ịdị iche iche (dịka ọmụmaatụ, ọ nwere ike ịbụ ụlọ obibi ma ọ bụ ụlọ obibi nke mahadum, ma ọ bụ ụlọ ntu ma ọ bụ yurts), a ga-ezitekwa nkọwa maka ihe omume ọ bụla na ndị nsonyere otu ọnwa tupu usoro amalite ụbọchị. N'oge nke 3, ndị na-eto eto ga-anọ n'ụlọ kwa abalị.
Maka mmemme malite na ọkara oge:
N'oge nke 1, ndị na-eto eto ga-anọ na-arụ ọrụ n'èzí n'ime ime obodo. Ụdị ụlọ nwere ike ịdị iche. O nwere ike ịbụ ụlọ ezumike nkpuchi, na njem njem ụlọikwuu abalị, ma ọ bụ na ọ nwere ike ịbụ mgbidi, ma ọ bụ ebe obibi ụlọikwuu. A ga-eziga nkọwa maka usoro nke ọ bụla na ndị natara ihe dika otu ọnwa tupu ụbọchị mmalite. Ihe niile dị mkpa dị mkpa, dị ka mmiri ozuzo na oghere ike, ga-adị. N'oge usoro ihe omume (Phase 2 na 3), ndị na-eto eto ga-anọ n'ụlọ kwa abalị.
Ozi Mgbede bụ ohere maka ndị na-amụ na ndị nne na nna ma ọ bụ ndị nlekọta iji nwetakwuo ihe ọmụma banyere NCS na ịjụ ajụjụ ọ bụla ha nwere ike inwe gbasara usoro ihe omume ahụ. Ọ bụkwa ohere maka ha izute ndị na-eto eto ndị ọzọ ga-ekere òkè n'otu usoro ahụ, na ndị mụrụ ha ma ọ bụ ndị nlekọta ha.
Anyị ga-eziga gị òkù maka Ozi Ọhụụ mgbe a kwadoro ebe ahụ. A na-emekarị izu 2 tupu usoro amalite. Anyị na-akwado gị ka ị bịa dị ka ndị na-agabu agafe na-achọta na ọ bara uru, ọ bụghị iwu ka ọ bụrụ. N'ọnọdụ ọ bụla, anyị ga-ezitere gị ntụziaka nduzi Summer / Mgbụsị akwụkwọ dịka otu ọnwa tupu usoro ahụ amalite ụbọchị site na email ma ọ bụ site na post, na-adabere na nhọrọ ahọpụtara na ngwa ahụ.
Anyị kwenyere na onye ọ bụla ruru afọ 15-17 kwesiri iru na NCS ma ọ bụ nnukwu uru maka ego. Gọọmentị na-etinye ihe karịrị £ 1,000 maka onye ọ bụla so na anyị nwere ike hụ na ihe omume ahụ na-efu gị karịa ego ego 50, ma ị na-etinye aka na NCS The Challenge ma ọ bụ NCS Trust. Ndị na-etinye oge na-ewepụ oge n'ebe obibi na ihe omume niile. Nke a na-agụnye ebe obibi, ihe oriri (mgbe ọ na-arụ ọrụ) na akụrụngwa.
Anyị na-enyekarị onyinye pụrụ iche maka ụlọ akwụkwọ anyị na-eleta. Ọ bụrụ na ịnwere ajụjụ gbasara enyemaka ego ma ọ bụ ịkwụ ụgwọ biko kpọtụrụ anyị.
Ihe ịma aka ahụ bụ iji kwado ndị nwere nsogbu na-enye ha ohere ịbanye ma nweta ihe kasị mma na NCS.
Dịka nchekwa bụ nchegbu anyị bụ isi, anyị na-enyocha akwụkwọ onye ọ bụla na-eto eto, karịsịa na-aṅa ntị na ozi ahụike na nkwado ndị enyere.
Ọ bụrụ na agwa anyị na ọ na-esiri onye na-eto eto ike ịgbaso iwu na ókè doro anya, anyị ga-akpọtụrụ nne ma ọ bụ nna ma ọ bụ onye nlekọta iji kwurịta nke a. N'ọnọdụ ụfọdụ, anyị ga-akpọtụrụ ụlọ akwụkwọ, ndị ọkachamara ma ọ bụ ndị ọkachamara ọzọ maka ozi ndị ọzọ. Anyị na-abịa na mkpebi banyere onye na-eto eto na nkwado dị ha mkpa na NCS. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, anyị ga-etinye nkwado ndị ọrụ ndị ọzọ n'ọnọdụ ebe onye na-eto eto nọ.
N'ọnọdụ niile, anyị ga-eme ka ndị ọrụ dị mkpa mara ụdị omume ọ bụla na-enye aka ka ha wee nwee ike ịkwado onye na-eto eto na ndị otu. Anyị nwekwara koodu omume. Anyị kọwaara ndị na-eto eto nke a na mmalite nke usoro ihe omume ahụ ma na-atụ anya ka ha soro ya. Usoro nke omume nwere ụfọdụ iwu banyere omume anyị na-atụ anya na usoro ihe omume ahụ, gụnyere iwu nchekwa, iwu, na ịkwanyere na gụnyere ndị ọzọ.
Ọ bụrụ na onye na-eto eto jiri nlezianya ma ọ bụ jiri nwayọọ nwayọọ mebie ụkpụrụ omume ahụ, ndị ọrụ ga-enyocha ọnọdụ ahụ ma kpebie ihe kachasị mma. N'ọnọdụ ụfọdụ, anyị nwere ike ịjụ onye na-eto eto ka ọ hapụ usoro ihe omume ahụ.
Nchebe na ọdịmma nke ndị so na ya bụ isi. A na-enye NCS n'ofe England na Northern Ireland site na netwọk ahụmahụ nke ndị ntorobịa na òtù obodo dị iche iche gụnyere ọrụ ebere, agụmakwụkwọ mahadum, ọrụ afọ ofufo, obodo, mmekọrịta mmadụ na ibe ya (VCSE) na mmekọrịta ndị ọzọ. Ndị ọrụ NCS bụ nyocha DBS (na mbụ CRB) ma nwee ọzụzụ kwesịrị ekwesị iji soro ndị na-eto eto rụọ ọrụ.
Ihe niile a na-eme na-atụle ma na-elekọta ma jiri nlezianya họrọ ndị nkụzi na ndị nkụzi a zụrụ nke ọma na usoro ihe omume ahụ dị mma na mpaghara na nke mba.
Ndi ga-etinye aka na NCS na etinye aka na omumu akwukwo omumu m?
Ee e. Usoro ihe omume NCS na-ewere ọnọdụ n'oge ezumike okpomọkụ. Oge mkpirisi anyi na oge opupu ihe ubi nwere ike ime n'oge obula n'oge ogwu ma obu oge opupu ihe ubi.
Usoro mmemme NCS na-ewere ọnọdụ na ezumike okpomọkụ. Oge mkpirisi anyi na oge opupu ihe ubi nwere ike ime n'oge obula n'oge ogwu ma obu oge opupu ihe ubi.
Nwa gị nwere ike ịdebanye mmasị ha site na iji akara aka na ibe anyị ma ọ bụ site na ịkpọ 0114 2999 210 ma ọ bụ site na-ezigara onye njikwa NCS gị, Richard na richard.r@element.li
Ozugbo ndebanye aha zuru ezu, anyị ga-ezitere gị nkọwa ndị ọzọ banyere ọrụ a kapịrị ọnụ ha debanyere.